MINISITERAN’NY PAOSITRA SY NY FIFANDRAISAN-DAVITRA : Niarahaba ny Filoham-pirenena vaovao
Nitondra ny teny fiarahabana ho an’ny Filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina amin’izao nahavoafidy azy izao, ary miarahaba ny vahoaka malagasy nahazo Filoha vaovao ihany koa, ny sekretera jeneralin’ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra, Harinjaka Rantozanama-nana. 10 janvier 2019
Ny tena mahafaly dia ny fanantenana hoentin’ny fahalanian’ny ny Filoha Andry Nirina Rajoelina satria mitondra fanantenana lehibe amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Eo ny maha tanora azy sy ny traikefa efa azony teo amin’ny fitondrana ny firenena, izay hahafahany manitsy ny fomba fitondrana nentin’ireo mpitondra teo aloha. Mirary soa ny vahoaka malagasy, indrindra ny filoha mba hahatontosa ny vina izay napetrany nandritra ny fifidianana, ary vina mahavelom-panantenana eo amin’ny ny teknolojia vaovao satria anisan’ny vina ara-piarahamonina napetraky ny filoha Rajoelina.
Mazava tsara ny resaka fomba fitantanana ara-teknolojia na ny (e-gouveranance) izay ahitana ny fahavononana ara- politika izay entin’ny fitondrana izay hitsangana eo, nanomboka 2006 no niresaka io fomba fitantanana ara-teknolojia io, ary tsy dia hita soritra mazava raha tsy efa aty amin’ny taona 2019 ny toerany eo amin’ny fiarahamonina. Amin’izao fijoroan’ny fitondrana vaovao izao dia antenaina ary azo atao tokoa ny resaka fitantanana ara-teknolojia izay efa mandeha amin’ny Firenena matanjaka maro, ka mba afaka hisitraka izay ihany koa isika Malagasy. Efa hita sy azo tanterahina sady mahavelombolo amin’izao fitondrana vaovao izao ny tanjona goavana hatao.
Vonona tanteraka hifanolo tanana amin’ny fitondram-panjakana vaovao izay ho avy eo izahay mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny teknolojia vaovao, ary hanolo-tanana ny filoham-pirenena vaovao mba hanatontosana ireo vina mahavelombolo antenaina ankehitriny .